अनलाइनमा गलत सामग्री देख्नुभयो ? सम्बन्धित ठाउँमा यसरी दिनुहोस् उजुरी – Esewanews
Home / Headline / अनलाइनमा गलत सामग्री देख्नुभयो ? सम्बन्धित ठाउँमा यसरी दिनुहोस् उजुरी
अनलाइनमा गलत सामग्री देख्नुभयो ? सम्बन्धित ठाउँमा यसरी दिनुहोस् उजुरी
Shivaram Khadka Headline, समाचार Leaveacomment 8040 Views
इन्टरनेटको युगमा अनलाइन दुर्व्यवहार एकदमै सामान्य भइसकेको छ । इन्टरनेटमा किशोरावस्थाका आधा जसो प्रयोगकर्ताहरु दैनिक अनलाइन बुलिङको सामना गरिरहेका हुन्छन् ।
तर बिडम्बनाको विषय त्यसमध्ये आधाले यस किसिमका गतिविधि विरुद्ध कहिल्यै रिपोर्ट गर्दैनन् । किनभने उनीहरुलाई रिपोर्ट तथा उजुरी गर्ने प्रक्रियाको कुनै जानकारी नै हुँदैन ।
त्यस्ता दूर्व्यवहारका घटनाहरु विरुद्ध उजुरी लिन तथा कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल प्रहरी अन्तर्गत साइबर ब्युरो गठन भएको छ ।
प्रेस काउन्सिलमा ईमेल मार्फत उजुरी पठाउन सुरुमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
अब यहाँ क्लिक गरी नमूनामा उल्लेख भएअनुसार निवेदन लेख्नुहोस् ।
स्क्रीनसट तथा लिंक जस्ता प्राप्त प्रमाणहरु अट्याच गर्नुहोस् ।
तपाईंले युट्युवलाई त्यहाँ रहेका अनुपयुक्त सामग्रीहरको विषयमा सोझै रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
रिपोर्ट गर्न चाहेको भिडियो मूनिको प्लेयरमा रहेको मोरमा क्लिक गर्नुहोस् ।
त्यसपछि देखा पर्ने मेनुमा गएर रिपोर्ट अप्सन चयन गर्नुहोस् ।
उक्त भिडियोले कुन नियम उल्लंघन गरेको छ भन्ने कुरा खुलाउन त्यहाँ रहेकामध्ये एउटा उपयुक्त विकल्प रोज्नुहोस् ।
त्यसपछि तपाईंको आरोपलाई पुष्टि गर्ने विवरणहरु जस्तै टाइमस्ट्याम्प (भिडियोको कति मिनेटमा त्यस्तो सामग्री छ) वा नियम उल्लंघनको व्याख्या सकेसम्म स्पष्ट रुपमा राख्नुहोस् ।
प्रत्येक च्यानल मूनी एउटा बटम रहेको हुन्छ त्यहाँबाट तपाईले च्यानलविरुद्ध रिपोर्ट गर्न सक्नहुन्छ ।
तपाईंले कुनै निश्चित युट्युव च्यानलकै विरुद्ध समेत उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित च्यानल खोल्नुहोस् ।
त्यहाँ दायाँ तर्फ रहेको अबाउट मा क्लिक गर्नुहोस् ।
अब त्यसको तल पट्टी रहेको झण्डा आकारको बटन दबाउनुहोस् ।
अब त्यहाँ तपाईंले आफ्नो गुनासोसँग मिल्ने उपयुक्त अप्सन चयन गरेर युट्युव च्यानलकै विरुद्ध उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ ।
कसैले अनुमति बिना तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी युट्युवमा पोस्ट गरे के गर्ने ?
सबैभन्दा पहिले जसले तपाईंको सामग्री अपलोड गरेको हो, उसँग सम्पर्क गरेर त्यस्तो सामग्री हटाउन आग्रह गर्नुहोस् ।
यदि तपाईंको आग्रह त्यस्तो व्यक्तिले मानेन वा सम्पर्क हुन सकेन भने तपाईंले यहाँ क्लिक गरी युट्युवको गोपनीयता निर्देशिका अनुसार त्यस्तो सामग्री हटाउनका लागि आग्रह गर्न सक्नु हुन्छ ।
यदि तपाईं अर्को तरिकाबाट युट्युवलाई रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरी युट्युवको रिपोर्टिङ सेक्सन र सेफ्टी गाइडलाइनहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईं कुनै ट्वीट विरुद्ध रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रिपोर्टको सान्दर्भिकता र कारणलाई केलाउन ट्वीटरले त्यस सम्बन्धी थप जानकारी माग्न सक्छ ।
तपाईंले रिपोर्ट गरेको ट्वीटका शब्दहरु ट्वीटरले आफ्नो फलोअपमा समावेश गर्नेछ र तपाईंलाई नोटिफिकेसन दिनेछ । थप विस्तृत जानकारीका लागि ट्वीटरको सेफ्टी एण्ड सेक्युरिटी सेक्सनमा जानुहोस् र प्लेटफर्ममा देखिएको अनपयुक्त सामग्रीहरुको रिपोर्ट गर्नुहोस् ।
पोस्टको माथिपट्टिको दायाँ भागमा रहेको तीन थोप्ला भएको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
त्यहाँ अन्तिममा रहेको फाइन्ड सपोर्ट अर रिपोर्ट पोस्टमा जानुहोस् ।
फेसबुकलाई त्यस्तो पोस्टको बारेमा सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन त्यहाँ रहेका मध्ये उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस् ।
सबमिट बटन थिचेर तपाईंले फेसबुकमा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
यहाँ क्लिक गरी फेसबुकमा रिपोर्ट गर्ने विषयमा थप जानकारी लिन समेत सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले यसरी रिपोर्ट गर्दा फेसबुकले कन्टेन्टको भिजिबिलिटीलाई सीमित बनाउन सक्छ । सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई त्यस्तो कन्टेन्ट प्लेटफर्मबाट डिलिट गर्न उसले आग्रह गर्न सक्छ । त्यस अलावा फेसबुकले उक्त अकाउन्टलाई निलम्बन गर्न समेत सक्छ ।
१ चैत्र २०७७, आईतवार ११:४१